ဝဋ်ကြွေးတွေ ပြေစေဖို့ ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေ ဖူးကြစို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေစေဖို့ ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေ ဖူးကြစို့
၀ဋ်ကြွေးတွေ ပြေစေဖို့ ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေ ဖူးကြစို့
Posted by manawphyulay on Aug 22, 2011 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
မယ်လမုကနေ စက်လှေနဲ့ အသွား ၁၀၀ ကျပ်နှင့် အပြန် ၁၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေဘုရားဘက်ရောက်တော့ လူတွေ အတော်စည်ကားလှပါတယ်။ တချို့ကလည်း ကားတွေနဲ့ ဘုရားဖူးလာကြတာ လူတွေမှ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားလှပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဘုရားတစ်ဆူပြီး တစ်ဆူဖူးတော့ မဟာကိုးသိန်း အရှင်ဌာပနာ ဘုရား လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဘုရား ၁၁ ဆူကို ငွေ သုံးထောင်ကျပ်နဲ့ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်အစုစုကိုလည်း မန်းဂေဇက်မှ မောင်နှမအားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်ရှင်။
နေရာစုံက ကားကြီး ကားငယ်တွေနဲ့ လာကြသလို ဈေးသည်တွေကလည်း အတော့်ကို စုံလင်လှပါတယ်။
မိုးရွာတော့ နီးရာနေရာကို အတင်းမိုးဝင်ခိုကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မနောတောင် ၀ဋ်ကြွေးတော်ပြေဘုရားမှာ မိုးခိုရင် ကြာကြာဖူးမြော်ခဲ့ရပါတယ်။
၀ဋ်ကြွေးတော်မြေ ဘုရားဝင်းအတွင်းကို အပေါ်ကနေ စီးပြီး ရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားတွေလှူပြီးရင် တိုက်ရိုက် ကပ်လှူပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်။ ဌာပနာအရှင် ပူဇော်ထားပါသည်။
နယ်စုံက ကလေးတွေလည်း ဒီလိုပဲ ဘုရားမှာ ပျော်ရွှင်ဆော့နေကြတာတွေလေ…
ဘုရားဆင်းတုတော်လည်း..ဖြည်းဖြည်းချင်း.. ငရဲပြည်နဲ့..နတ်ပြည်ကြား.. ပွဲစားဖြစ်နေပြီလားမသိ…။
ဟုတ်ကဲ့ပါသဂျီးရေ… ၀ဋ်ကြွေးကျေဖို့ ငွေလှူခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ခုဘုရားတွေတည်နေပါတယ်။ သဒ္ဒါတရားရှိရင် လှူနိုင်ပါတယ်။ ၀ဋ်ကြွေးဆိုတာ ရှိနေသရွေ့ ဆပ်နေမှာပါပဲ။ မကောင်းမှုတွေ များများလုပ်ပြီး ငွေလှူရင် ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကိုတော့ မပေးပါနဲ့ရှင်။ ခုတည်နေတဲ့ဘုရားတွေ စေတီတွေမှာ သာသနာပြုချင်သူများအတွက် ဘုရားဆင်းတုတော်တွေလှူပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ထားတယ်လို့ မနောတော့ မြင်မိပါတယ်ရှင်….
တကယ်က ကိလေသ၀ဋ် (၃)ပါး ၊ ကမ္မ၀ဋ် (၂)ပါး ၊ ၀ိပါက၀ဋ် (၈) ပါး ရှိပါတယ်။
ထို ၀ဋ်များကို အမှန်တကယ် ပြေစေ – ကြေစေလိုပါက…
ဒါန တစ်မျိုးတင်မကဘဲ။ သီလ မှသည် ….၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ထိ တက်လှမ်းဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
ဝိပဿနာနဲ့ကြုံတာတောင် ဆုံခွင့်မရနိုင်တဲ့ အတ္တဝါဒီသဂျီးအတွက်ကတော့ ဘုရားမှာ သူ့ဝဋ်ကြွေးပြေအောင် ဆုတောင်းပေးဖို့မှတပါး အခြားမရှိပြီ…။ သဂျီးမင်းအား (ငရဲ)ခွေးလွှတ်တော်မူပါ။ မိုးကြိုးပစ်ချတော်မူပါ၊ ဘီလူးဂုမ္ဘာန်တသိန်းစေလွှတ် ဆုံးမတော်မူပါ…။
အဲဒီအကောင်တွေ.. လပ်စ်ဗေးဂတ်မှာ.. ရုံးသွင်းပြလိုက်လို့ကတော့.. အပွပဲ.။
အဲ… အဲ့ဒီဘုရားတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး…. စက်လှေနဲ့သွားမှ ရတာလား .. ကားနဲ့ရော မရဘူးလား … ။
စက်လှေမစီးချင်ရင် တံတားနဲ့သွားလို့ရမယ့်နေရာက သွားရင် ရမလားတော့မသိ
အဲ… ဒါမှ ဒုက္ခ … ဒီကစက်လှေတွေက ဘာ အသက်ကယ်အကျီ င်္မှ ပေးမှာမဟုတ်ဘူး… ကိုယ်ကလည်း .. ရေကြောက်ကြောက်နဲ့ … ဘယ်လိုပဲ ရေးကူးသင်သင် ရေထဲဆင်းလိုက်လျှင် ကူးဖို့ သတိမရလွန်းလို့ … ခဏခဏ မြုပ်သွားဖူးတယ် … အဲ့ဒီတုန်းက လေးပေကန်မှာ … အဲ့ဒီတုန်းကတောင် ရေသေမို့လို့ …. ရေ ရှင်ဆို … သေပြီပဲ … ။ ရေချိုးတာနဲ့ .. မိုးရေကလွဲလို့.. ကျန်တဲ့ရေဆို အကုန်ကြောက်တယ်
စက်လှေမှာ ဂျက်ကက်တွေ ပါပါတယ်။ ရေလမ်းအရမ်းကြောက်တဲ့သူတွေ ၀တ်လို့ရပါတယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းက ချောင်းလေးပဲ ဖြတ်ကူးတာဆိုတော့ သိပ်တော့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူး။ ရေလယ်ကျောက်တန်းလောက် ရေမဖြတ်ရပါဘူး။ စက်လှေပေါ်က တန်းတွေမှာ တစ်တန်းကို ၄ ယောက်ထိုင်ရပါတယ်။ မနောတို့သွားတဲ့အချိန်တုန်းက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ဟိုဘက်ကမ်းက ပြန်လာတော့ မိုးအတော့်ကိုရွာပါတယ်။ ပထမ ထီးဆောင်းထားပြီး ကမ်းကပ်ချိန်မှာ ထီးတွေ ပိတ်ခိုင်းပါတယ်။ စက်သပ်ပြီး ကမ်းကပ်မှာမို့တဲ့လေ…
တကယ်လို့ ရေကြောက်နေရင် ဒဂုံဘက်ကနေ ကားဂိတ်မှာဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ဝင်လည်းရပါတယ်။ တံတားကဖြတ်တဲ့ကားကိုစီးရင် ရပါတယ်။ နောက် အားတဲ့နေ့တစ်ရက်လောက် မယ်လမုနားက အာနန္ဒာဘုရားပုံနဲ့ ဘုရားဘက်ကို ထပ်မံသွားဖူးပါဦးမယ်။
ဒီမှာက လေးပေကန်မှာတောင် ရေမွမ်းတာ …ချောင်းသေးသေးလေးဆိုပေမဲ့.. ကြောက်ပါတယ် ဆို ဟင့်
ဟိုအောက်က ရွှေအိမ်စည်ကလည်း .. .ရေကူးချန်ပလုံတဲ့ … ရှိစုမဲ့စု ထုတ်ကြွားတာ အားကိုးလောက်ပါတယ်နော်
လိုက်ပို့ တြ့ မနောကိုကျေးဇူးပါ…..
မကြောက်ပါနဲ့ ကိုယ်ဖော့ တတ်ရင်ရေသန့် ဘူးအလွတ်တဗူးရှိရင်တောင်
ရေလမ်းတော့ကြောပါတယ်။ရေကူ ချန်ပီယံတွေ ပါရင်တော့ လိုက်မှာလေ။ဟိ ဟိ ခေါ်မှာလား။ဘုရားဖူးသွားမယ်လေ—
ကျွန်တော်ကအဝေးရောက်နေတော့တစ်ခါမှ မဖူးဘူးပါဘူး မနော နောက်တစ်ခေါက်သွားလို့အဆင်ပြေရင်လိုက်ဖူးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဘ၀မှာ သောတပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင် ၀ဋ်ကြွေးတွေမကြေနိုင်သေးပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး ဒီဘုရားကို ဖူးရုံနဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေကြေဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါ၊ဘုရားဖူးတာကတော့ ကုသိုလ်ရပါတယ်။ ဒီဘုရားဖူးပြီး ၀ဋ်ကြွေးတွေကြေပြီလို့ယုံကြည်ယူဆနေသူတွေအတွက် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကို တဖန်တွေးတောပြီး ပူပင်ခြင်း မရှိလို့ အကုသိုလ်တွေထပ်မပွားအောင် စိတ်ရဲ့ ဦးတည်ရာကို လှည်ပေးစေနိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဘာအကုသိုလ်ပဲလုပ်လုပ် နောက်ဆုံး ဒီဘုရားကို ဖူးလိုက်ရင် ၀ဋ်ကြွေးကြေပြီ ဆိုပြီး ဒီဘုရားအားကိုးနဲ့ အကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်တော့ လူဖြစ်ရှုံးပါလိမ့်မယ်။